Ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo garoonka Aaden Adde ku soo dhaweeyay xulka 17-jirada qaranka. - صحف نت
english اليمن العربي الثلاثاء 01 مايو 2018 01:34 مساءً تبليغ حذف
صحف نت - Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa Garoonka Dayuuradaha Aaden Adde ku soo dhoweeyay xulka Ciyaartoyda 17-jirada Soomaaliya oo Guul Taariikhi ah ka soo hoyay Tartankii CECAFA ee lagu qabtay dalka Burundi.
Mudane Kheyre, wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa, Xildhibaano iyo Masuuliyiin kale ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyay Da’yarta Qaranka Soomaaliya, iyagoo ugu hambalyeeyay guusha taariikhiga ah ee ay gaareen.
Tartanka bariga iyo bartamaha afrika ee CECAFA ayaa waxaa ka qeyb galay siddeed dal oo kala ah Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Zanzibar, Ethiopia, Sudan iyo Soomaaliya, waxaana kaalinta koobaad ku soo baxay Xulka Tanzania oo Xulka Qaranka Soomaaliya Ciyaartii dhammaadka tartanka kaga adkaaday 2-0, inkastoo bandhigga iyo awoodda ciyaarta ay gacanta ku hayeen Da’yarta Dalka Soomaaliya, waxayna Soomaaliya sidaas ku gashay Kaalinta labaad.
Waa markii ugu horeysay ee ciyaartoy Soomaaliyeed ay guul taariikhi ah oo heerkaas gaarsiisan ka keenaan tartamada dibeda muddo 28 sano ah. waana tusaale muujinaya sida ay soomaaliya uga soo kabaneyso dhibaatooyinkii soo gaaray waxii ka danbeeyay 1991, xilligaas oo ku beegneed burburkii xukuumaddii militirga.
"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (Ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo garoonka Aaden Adde ku soo dhaweeyay xulka 17-jirada qaranka. - صحف نت) من موقع (اليمن العربي)"
السابق Governmental Forces advancing at the west coast toward Hodeida
التالى Two civilians killed, and others injured in coalition airstrikes and shelling on Saadah